सलाले तोडे मेस्सीको रेकर्ड, रोनाल्डोको रेकर्ड तोडिने खतरा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सलाले तोडे मेस्सीको रेकर्ड, रोनाल्डोको रेकर्ड तोडिने खतरा
एजेन्सी । लिभरपुलका स्ट्राइकर मोहम्मद सलाले फुटबलका दुई हस्ती लियोनल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोको रेकर्ड तोडेका छन् । सलाले यस सिजन घरेलु लिगमा स्टार मेस्सीलाई पछि पार्दै लिगमा सबैभन्दा पहिले ३० गोल गर्न सफल भएका हुन् । शनिबारसम्म मेस्सी र सलाको समान २९–२९ गोल थियो ।
तर लिभरपुलका सलाले बर्नमाउथविरुद्ध एक गोल गरेपछि उनले यस सिजन मेस्सीभन्दा अघि ३० गोल बनाउने रेकर्ड बनाएका हुन् । मोहम्मद सला यस सिजन युरोपका पाँच प्रतिष्ठित लिगहरुमा सबैभन्दा अगाडी ३० गोल गर्न समेत सफल भए । यसैगरी इजिप्टका सला प्रिमियर लिगमा ३० गोल गर्ने प्रथम अफ्रिकी खेलाडी समेत भएका छन् । यसअघि आइभोरी कोस्टका डिडिएर ड्रोग्बाले २९ गोल गरेका थिए ।
यसैबीच मोहम्मद सलाले रोनाल्डोले प्रिमियर लिगमा बनाएको रेकर्ड तोड्ने अवस्था सृजना हुन थालेको छ । रोनाल्डोले यसअघि म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट एक सिजन ३१ गोलगर्दै प्रिमियर लिगमा गोल्डेन बुट पाएका थिए । रोनाल्डोसँगै लुइस स्वारेज र अलान सियररको पनि समान ३१ गोलको किर्तिमानी छ ।
तर सलाको अहिलेनै ३० गोल छ । उसको टोली लिभरपुलले अझै ४ खेल खेल्न बाँकी छ । यदि उनले ४ खेलमा २ वा २ भन्दा माथि स्कोर गरेभने रोनाल्डो, स्वारेज र सियररको किर्तिमानी भंग हुनेछ । सला यस सिजन प्रिमियर लिगको सर्वाधिक गोलकर्ताको शिर्ष स्थानमा छन् । उनले च्याम्पियन्स लिगमा पनि रोनाल्डोलाई पछ्याई रहेका छन् ।
रोनाल्डो च्याम्पियन्स लिगका १५ गोल सहित सर्वाधिक गोलकर्ताको शिर्ष स्थानमा रहँदा सला ८ गोल सहित तेस्रो स्थानमा रहेर रोनाल्डोलाई पछ्याई रहेका छन् । दुवैको टोली च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् ।